Haydarpaşa’yı Beklerken - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါ Haydarpasa ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
BTS ယခင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး KOCABIYIK haydarpasa Gary ရေးသားခဲ့သည်
BTS ဟောင်းများအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဣဇာက်သည်KocabıyıkHaydarpaşaရထားဘူတာရေးသားခဲ့သည်။ Haydarpaşaမဟုတ် 400 နှစ်ပေါင်း 111 အပြည့်အဝရှိအပတ်ကရှိရာ။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်။ မြို့တံခါးဝသို့။ အရာအားလုံးနေသော်လည်း, မာနထောင်လွှား
ရှမွေလသည် Beckett သင်ကအော်ဝဲလ်တစ်ဦးကိုကိုးကားခဲ့ထင် "Godot အဘို့ကိုစောင့်နေ" ၏ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ရှု။ အနားမှာတစ်ဦးကအခြမ်းမဟုတ်, လက်ျာ။
ညာဘက်ကြောင့်ယနေ့ချိန်အထိဆက်လက်ရသောအပြည့်အဝ 400 ရက်သတ္တပတ်က, Haydarpasa ရထားသံကို, သူတို့ရဲ့ခရီးသည်များ၏ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်နှင့် function ကိုရွှေ့ကြောင့်အကြီးအကငျြ့ယိုယှငျးဖျက်ဆီးဖို့လိုပေမည်။
ဘယ်မှာမရှိ Haydarpasa 400 နှစ်ပေါင်း 111 အပြည့်အဝအပတ်ကမှားယွင်းတဲ့။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်။ မြို့တံခါးဝသို့။ အရာအားလုံးနေသော်လည်းမာနထောင်လွှား။
ဒီတော့ 400 လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တိုင်းစျေးကွက်တစ်ရက်အပါအဝင်Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်, "ထိုင်-In" အဘယျသို့ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်ခဲ့တာလဲ
သူကပုံပြင်နှင့်အမှန်တရား xnumx'l တစ်နှစ်ရဲ့အစမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ AKP အစိုးရတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ 2000 နှစ်ကောင်းတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်, ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးသည်မြို့တော်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းနှင့်မန်နေဂျာခဲ့သည်။ မြို့ငှားကျနော်တို့လုယက်ခြင်းနှင့်peşkeşလယ်ကွင်းအဖြစ်တွေ့မြင်ပြောနိုင်: အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ခုတည်းသောအဖြေများမှာမသက်ဆိုင်ဘုံ features တွေကိုခေါ်ခဲ့ရာမှထွက်ပေးလိမ့်မည်။
ဤဒေသများတစ်ခုမှာ Haydarpasa ရထားဘူတာဧရိယာနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဧရိယာသွန်းငွေစက္ကူတွေနဲ့တူ drool သောသူတို့၏အမျိုးအချင်းစီ၏တည်နေရာနှင့်အတူမြို့၏အရွယ်အစားနှင့်တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. 1 သန်းစတုရန်းမီတာလွှမ်းခြုံဆိပ်ကမ်းဘူတာနှင့်နောက်ကျောမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးမြို့ပြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါဒါသို့သော်ဤအဖြစ်ဥပဒေနှင့်လိုက်နာမှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာနှစ်ဦးစလုံးစီးပွားရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမည်။ ဒါပေမယ့်တခြားအချိန်များတွင်ပြုအဖြစ်အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောလိုက်နာမှု, အပြင်ကတခြားနေရာတွေကိုကဲ့သို့ရှိ၏မုသာမသုံးနဲ့စိတ်ကူးကိုသူတို့အနာဂတ်ထုတ်ပြန်ချက်များပြောင်ဖို့ရောကျလာ။
အဘယ်အရာကိုHaydarpaşaပြုခဲ့ 15 နှစ်ပေါင်း ...
မန်ဟက်တန်အတွက်ပထမဦးစွာ7အပိုင်းပိုင်းနှင့်xnumx'şထပ်တိုက်မိုးမျှော်တိုက်ကိုဖန်ဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမရကိုပြု၏။ အစိမ်းရောင်ဧရိယာများနှင့်ဟိုတယ်ကျင်းပမည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလည်းကြီးမားစျေးဝယ်စင်တာခဲ့ကြဘူးနှင့်ခရုဇ်သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းဆိုက်ကပ်လိမ့်မယ်။ သူကမဟုတ်ကိုပြု၏။
အိုလံပစ်အားကစားကွင်းနှင့်အဆောက်အဦကောင်းကောင်းခဲ့ကြပြီ။ သူကမဟုတ်ကိုပြု၏။ ရဲ့ဖန်ဓာတ်လှေကားကြမ်းပြင်ကျန်ကြွင်းပါစို့ပြင်ပတွင်အစာရှောင်ခြင်းအစာကိုရဖို့လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကမဟုတ်ကိုပြု၏။
ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်Kadıköyမြို့တော်ဝန် AKP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း "Haydarpasa အစ္စတန်ဘူလ်ဒီဇိုင်းရေးစင်တာပြုပါလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ သူကပင်ပြုလုပ်သောအရာကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။
သူတို့ကဒီလယ်ပြင်၌ရှိသောအရာအားလုံးကိုရှိသည်ဖို့ချင်တယ်။ သူတို့ကပဲသူတို့ကအများပြည်သူနှင့်အများပြည်သူပွင့်လင်းဧရိယာဖြစ်ချင်ကြဘူး, ကူးတို့၏ဆိုက်ကပ်, ရထားလာချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ကမြို့တော်ဒအဆင်ပြေ မှလွဲ. ဘာမှမလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့အများပြည်သူ, လူထု, ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများ, အခန်း, တရားရုံးများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မခံမယူခဲ့ပါဘူးသူတို့တရားစီရင်ရေးရိုးသားရှေ့နေများဖြစ်ချင်သည်အထိန်ထမ်း, သူ့လက်ကိုကိုင်ထားချင်ပါတယ်, တရားသူကြီးများ၏ရှေ့မှောက်တွင်အမြဲဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ခဲ့သည်။
သူလည်း Haydarpasa ရထားအနာဂတ်တရားစီရင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူရထားသွားလိမ့်မည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအများပြည်သူအာကာသအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိစေမည်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမသာတရားစီရင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်တွင်, ဆီးနှင်းမုန်တိုင်း၏တစည်းတိုက်ခိုက်နေပူကနေအအေးမှ 400 ပတ်ခိုင်မာHaydarpaşaလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများကိုဆက်လက်သူတို့ကိုထောကျပံ့ပေးသူကိုနိုင်ငံသားသန်းပေါင်းများစွာ၏ပံ့ပိုးမှုရှိပါတယ်။
အခုတော့အလီ Cengiz ဂိမ်းတိုက်ပွဲများ၏ 400 ရက်သတ္တပတ်လျစ်လျူရှုတော်မူသောသားငယ်ကိုအုပ်တတ်အတူငာ Haydarpasa ရထားဘူတာများတွင်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်သူလေ့ရှိရာအရပျလှည်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလာအနည်းငယ်အမြန်ရှိသည်ဖို့, အလုံးစုံတရားစီရင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတည်ပြုသောအရာနှင့်မရေတွက် "ကအော်တိုမန်အင်ပါယာအတွက်ဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်ပါဘူး" ။
ကျနော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါတို့သည်သင်တို့ 400 ရက်သတ္တပတ်ကြာမြင့်တိုက်ပွဲ၏အကျိုးအမြတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Haydarpasa အမွေအနှစ်နိုင်ငံအတွင်းတစ်ခုတည်းသောမြို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိသည်အရပ်မှနိုင်ငံသားများနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်, Haydarpasa အတွက်သာသူမြားမဟုတျပါဘူးအဖြစ်ကျနော်တို့စခန်းခုခံကာကွယ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ Haydarpasa နှင့်အတူတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နှင့်အတူတာပေါ့။ (ထို BTS ၏ဣဇာက်သည် KOCABIYIK- ဟောင်းတဦးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်)
Haydarpasa မှာစီးနင်းစာအုပ်ဆိုင် 02 / 06 / 2016 Haydarpasa မှာစီးနင်းစာအုပ်ဆိုင်: ဒီတစ်နှစ်ရဲ့သမိုင်းဝင် Haydarpasa ရထားဘူတာကျမ်းနေ့ရက်များရာအရပျကိုယူ၏ဖွင့်ပွဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Tour တဦးတည်းလက်ဖတ်ထိုင်နှင့်Haydarpaşaရထားဘူတာလှည်းနှင့်အတူယခုနှစ်ရက်စွဲ၏စာအုပ်နေ့ရက်များကစီစဉ်စာအုပ်Gönüllüleri'yl Kadikoy အစ္စတန်ဘူလ်Kadıköyမြူနီစီပယ်အခြားတစ်ဖက်သယ်ဆောင်ဖတ်ဖြစ်ရပ်အတွက်ပါဝင်ရပ်တည်။ ပင်လယ်အော်အတွင်းစခန်းများ Haydarpasa ရထားဘူတာ kitapseverl တွေ့ဆုံရန်စာရေးဆရာများအဋ္ဌအချိန်ဒီနှစ်ဖွဲ့စည်းအဆိုပါဖြစ်ရပ်, ။5မနေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ် 112 8 ကြေညာသူနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများတက်ရောက်ခြင်းမှဇွန်လစာအုပ်နေ့ရက်များသည်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ 53 အင်တာဗျူးအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ, 600 နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါဝင်မှုပိတ်ဖို့ရန်နေ့ကလက်မှတ်ထိုးမှပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။ 8 '' ကျနော်တို့သင်တို့သည်ဤမျှလက်လွတ် '' ... ။
Haydarpasa အင်တာဗျူးကောက်ယူခဲ့သည် Defending နေ့စွဲ Garan, 07 / 06 / 2016 Haydarpasa အင်တာဗျူး Defending နေ့စွဲ Garan, ကောက်ယူခဲ့သည်: 8 Kadikoy မြူနီစီပယ်အတွက်Haydarpaşaရထားဘူတာကစီစဉ်။ အင်တာဗျူး၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် Haydarpasa စာအုပ်နေ့ရက်များ Defending ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့၌အကြှနျုပျတို့၏နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးစီမံကိန်းများကိုအဆက်မပြတ်သမိုင်းကိုအထွက်ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေနှင့်အတူ '' သည် Kadikoy မြို့တော်ဝန် Aykurt Nuhoğluအင်တာဗျူးပြောဆိုခြင်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလူထုဖိအားကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် "ဟုသူကHaydarpaşaရထားဘူတာကစီစဉ် 8 Kadikoy မြူနီစီပယ်ကပြောပါတယ်။ အင်တာဗျူး၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် Haydarpasa စာအုပ်နေ့ရက်များ Defending ကျင်းပခဲ့သည်။ အင်တာဗျူး Kadikoy မြို့တော်ဝန် Aykurt Nuhoğluယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်ထောင်စုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး Seger Retera Hasan Bektas နှင့်စပီကာအဖြစ်ဗိသုကာဥက္ကဋ္ဌEyüp MUHCU ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာပြင်းထန်သောကာလ၏စာအုပ်ကနေဖတ် ...
Haydarpasa မှာစာအုပ်နေ့ရက်များမနက်ဖြန်စတင် 02 / 06 / 2017 Haydarpasa မနက်ဖြန်မှာစာအုပ်နေ့ရက်များစတင်: Haydarpasa ရထားဘူတာ, ဇွန်လအတွက် 3-119။ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခံရဖို့ Kadikoy စာအုပ်များနေ့ရက်များ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသမိုင်းဝင် Haydarpasa ဘူတာတွင်ကျင်းပခဲ့သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်နှင့် 100 တထောင်စာဖတ်သူများများအတွက်Kadıköyမြူနီစီပယ်စာအုပ်နေ့ရက်များသမိုင်းဝင်ဘူတာရုံ၏သမိုင်းဝင်လေထုထဲတွင်ဒီနှစ်နောက်တဖန်ကျင်းပလိမ့်မည်သွားရောက်ခဲ့သည်။3စနေနေ့ဇွန်လရက်နေ့တွင်စတင်မည်နှင့်99 ရက်ပေါင်းဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ် 200 ပိတ်ဖို့ရန်သဘောတူရန်နေ့ရက်များစာအုပ်ထုတ်ဝေသူ။ စာအုပ် Show ကိုယနေ့မိမိ၏ရေဒီယိုနာရီမီဒီယာစပွန်ဆာ၏အဖွင့်စနေနေ့ဇွန်လ313.00 အပေါ်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ဂုဏျတငျခေတ်ပြိုင်Fürüzan၏ဧည့်သည်များအတွက်Füruzanတူရကီစာပေ၏အရေးကြီးသောအမည်များကိုယခုနှစ်ရဲ့စာအုပ်နေ့ရက်များ ...
သငျသညျ Kars ထံမှဘာကူဖို့ရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်, သငျသညျHaydarpaşa Izmit ထံမှအများကြီးမျှော်လင့်ထား 30 / 10 / 2017 တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ, မနေ့ကတစ်နှစ် xnumx'inc အရှိန်မြှ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရီပတ်ဘလီကန်ကာလ, တိုင်းပြည်တကယ်သိသိသာသာအကျိုးအမြတ်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ AKP 95 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအောက်တွင်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လုပ်အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရှင်းပြခဲ့သည်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တင်ပို့ကြောင်းနိုင်ငံများတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်သင်္ဘောကမ္ဘာကြီးပင်လယ်မှဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီကြီးဆိပ်ကမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကျနော်တို့လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခေတ်လက်လွတ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမြို့လေဆိပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအရပျကိုလေယာဉ်ပျံ heaving ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကောင်းစွာပြုလေ၏, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆိပ်လေကြောင်းရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးလမ်းများနှစ်ဆလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ နယူးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပြုပြုမိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်တကယ်ကရထားလမ်းအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယနေ့တွင်တစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းမရှိ။ Kars-Tbilisi-ဘာကူရထားလမ်း ...
Haydarpasa မှာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုယနေ့! 31 / 01 / 2012 အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Marmaray စီမံကိန်း၏သမိုင်းဝင် Haydarpasa ရထားမြန်နှုန်းအလုပ်နှင့်အချိန်မနက်ဖြန်ကနေဘူတာမှာရပ်တန့်နေသည်။ မနေ့ကအဆုံးရန်အချိန်ရှာဖွေတူရကီလမျးညှနျခထဲကနေအစ္စတန်ဘူလ်, နောက်ဆုံးရထားယနေ့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှမထွက်။ Fatih Express, Haydarpasa 23.30 နာရီကနေရွှေ့မည်။ ဘူတာရုံ 30 လအတွင်းအချိန်များအတွက်တံခါးပိတ်ရှိနေပါဦးမည်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) တို့အကြားလုပ်ကိုင်ရန်ယခုနှစ် 2013 တွင်ပြီးစီးရန်၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Marmaray နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထွက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့လေ့လာမှုများ, 2013 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ bi-directional လျှပ်စစ်လိုင်းများ, အချက်ပြနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအရသိရသည်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေးထားကြသည်များအတွက်တည်ဆဲမီးရထားလိုင်းမှအချိန်တန်မှရှာရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါ 1908 ခုနှစ်တွင် "အဖြစ်မကြာမီဖွင့်လှစ်" ...
Haydarpasa အင်တာဗျူးကောက်ယူခဲ့သည် Defending နေ့စွဲ Garan,
သငျသညျ Kars ထံမှဘာကူဖို့ရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်, သငျသညျHaydarpaşa Izmit ထံမှအများကြီးမျှော်လင့်ထား
Haydarpasa ရထား Adapazari ဘယ်အချိန်မှာသွားပါသလော
Konya သစ်ကို tramway နှင့် Metrobus အိပ်မက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အစောပိုင်း Denizli မြူနီစီပယ်ပြုမူ
အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေဒီထက်အချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်